चाँगुनारायणमा नयाँ कलेज सञ्चालन : रोम्बस स्कूलको सफलतापछि अब रोम्बस कलेज पनि — Bhaktapurpost.com
चाँगुनारायणमा नयाँ कलेज सञ्चालन : रोम्बस स्कूलको सफलतापछि अब रोम्बस कलेज पनि
भक्तपुर, १९ साउन
भक्तपुर, १८ साउन । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा नयाँ कलेज सञ्चालनमा आएको छ । चाँगुनारायण- ७ कमलविनायकमा नयाँ कलेज संचालनमा आएको हो ।
विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका शिक्षाकर्मी मिलेर नयाँ कलेज संचालनमा ल्याएका हुन् ।रोम्बस स्कूलको सफलतापछि ‘रोम्बस नेशनल कलेज’ नामक कलेज शनिवार उद्घाटन गरिएको हो । उक्त कलेजका प्रिन्सिपलमा शिक्षाकर्मी डा. राजेन्द्र कोजू रहेका छन् ।
शनिवार चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र द्वन्द्व व्यवस्थापनविद् एवं नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्माले संयुक्त रुपमा कलेज उद्घाटन गरेका थिए ।
कलेज उद्घाटनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख मिश्र र द्वन्द्व व्यवस्थापनविद् शर्माले कलेजले शिक्षाको गुणस्तर बढाउँन मद्दत गर्नुपर्ने बताउदै सम्पन्नको लागि मात्र नभई विपन्न विद्यार्थीलाई समेत शिक्षाको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उक्त अवसरमा उनीहरुले भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई ‘शतप्रतिशत छुट’ को पत्र समेत प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा उनीहरुले शिक्षा सुधारका लागि थुप्रै सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा बीएसडब्लू र बीबीएसको पठनपाठन गर्ने गरी कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको कलेजका प्रिन्सिपल डा. राजेन्द्र कोजूले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक र व्यवहारिक रुपले शिक्षा दिनका लागि कलेज सञ्चालनमा ल्याएका हौं ।’ उनले भने ।
कलेज व्यापारिक उदेश्यले नभई सेवाको भावनाबाट संचालनमा ल्याइएको र शिक्षाको विकाशमा यसको ससक्त योगदान रहने प्रिन्सिपल कोजुको दावी रहेको छ ।